Aajako Rashifal: २०७८ सालको अन्तिमदिन आज, चम्किंदैछ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल - Horoscope Today: Astrological Prediction
HomeRashifalAajako Rashifal: २०७८ सालको अन्तिमदिन आज, चम्किंदैछ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल...
Aajako Rashifal: २०७८ सालको अन्तिमदिन आज, चम्किंदैछ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल – Horoscope Today: Astrological Prediction
Aajako Rashifal आजको पात्रो: ३० चैत बुधबार,२०७८ सालको अन्तिम दिन । जनबोलीमा आजको दिनलाई मसान्त पनि भनिन्छ । तद्नुसार अप्रिल १३ तारिक २०२२ । चैतशुक्लपक्ष द्धादशी तिथि, बब करण, मघा नक्षत्र, गण्ड योग, चन्द्रमा सिह राशिमा रहेको छ । आजको देवता अग्नी र ग्रहदेव शनि रहेको छ । आज विहान सूर्योदय ५ः४२ र सूर्यास्त ०६ः२७ मा हुनेछ । आज १२ः०५ देखि १ः४१ सम्म राहुकाल रहेको छ । बुधबारको दिन घर गृहस्थसम्बन्धी कार्य गर्दा शुभ हुनेछ । बर्षको अन्तिम दिन भएकाले बर्षभरी गरेका कार्यहरुको समीक्षा गर्ने दिन हो । भोलिबाट नयाँ बर्ष शुरु हुनेछ ।
Aajako Rashifal आजको राशिफल :
Aajako Rashifal मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ)
मेष राशिको जातकको लागि आजको दिन आकस्मिक अर्थलाभ हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली र सुखद यात्रा हुने देखिन्छ ।आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला । मित्रजन र घर परिवारबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । विगतमा रोकिएका कामहरु सम्पन्न हुनेछ ।
तपाईले आजको दिन विगतमा गरेको कामबाट मानसम्मान मिल्नेछ । शत्रुमाथि विजयप्राप्ति हुनेछ । आर्थिक हानी लाभ दुवै हुनसक्ने छ । त्यसैले आजको दिन खर्च हुने काममा सोच पुर्याउनु होला । मनमा अनेक कुरा खेल्नेछन् । आफन्तजनसँग वादविवाद हुनसक्छ ।
आजको दिन यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ यात्रा कष्टकर हुनेछ । मनमा अशान्ति छाउने छ । अध्ययन अध्यापनको काममा लाग्नु वेश हुनेछ । ध्यान साधनामा समय विताउनु भयो भने मनमा उर्जा प्राप्त हुनेछ । सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । कसैसँग पनि विवाद नगर्नुहोला ।
आजको दिन कर्कट राशिका जातकका लागि पारिवारिक समस्याका कारण मनमा अनेक चिन्ता हुनसक्छ । आजको दिन मौन रहनु होला । कसैसँग पनि वादविवाद गर्दा तपाईको लागि अपजस आउनसक्छ । त्यसैले आजको दिन मेरो लागि यस्तै नियमको पालना गर्नु ठीक छ भनेर पालना गर्नुहोला ।
See also देशभर ४७ हजार ६१७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
तपाईलाई आज आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राका समस्या हुनसक्छ । परिवारको साथ पाउने योग रहेको छ । तपाईले गर्नुभएको कामबाट सन्तुष्ठ प्राप्ति होला । सकारात्मक सोच लिनु वेश हुनेछ । कसैसँग पनि विवाद नगर्नुहोला । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । विहानको सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला ।
मानसिक असन्तोष, परिवारमा विवाद हुनसक्ने भएकाले परिवारका सदस्य र आफ्ना इष्टमित्रसँग विवाद नगर्नुहोला । कुनै नयाँ काम गर्न आटनुभएको छ भने बाधा आउनसक्छ । आफूले गरिरहेको नियमित काममा खुसी खोज्नुहोस् । सकारात्मक सोच र देवालय शिवालयको दर्शन गर्नुहोला ।
तपाईले आजको दिन शुरु गरेको काम सफल हुनेछ । तपाईले आज सबैको भलाइ हुने काम गर्दा वेश हुनेछ । सामाजिक काममा लाग्ने गर्नुभएको छ भने मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । परिवार र आफन्तजनले तपाईले गरेको कामको निकै प्रसंशा गर्नेछन्।
समय अनुकुल छैन भन्ने जानेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला । यात्रामा अनावश्यक समस्या आउनसक्छ । स्वाथ्स्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला । तपाईले समय खर्च गरेर गरेको कामबाट सफलता प्राप्त नहुनसक्छ । त्यसको कारण तपाईमा चिन्ता उत्पन्न हुनसक्छ ।
तपाईलाई व्यापार ब्यबसायबाट लाभ हुनेछ । सन्तानबाट साथ सहयोग, परिवारबाट नयाँ कार्ययोजना र आफन्तजनको सहयोग हुनेछ । धनु राशिका जातकको लागि आजको दिन कुमारी कन्याहरुलाई भोजन र दान दिनुभएकामा तपाईको उन्नती र प्रगतिको बाटोहरु खुल्नेछन् ।
सातामा आजको दिन कार्यसिद्धि हुनेछ । तपाईले गर्नु खोज्नुभएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । यात्रा गर्नु अघि एकपटक सोच्नुहोला । यदी यात्रा गर्नुछ भने पूर्व तर्फ फर्केर शुरुवात गर्नुहोला । परिवारका सदस्यहरुको साथ सहयोगले नयाँ काम हुनेछ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । विहानको सूर्योदयको दर्शनपछि शुरु गरेको काम सफल हुनेछ ।
See also R-Sport Team: Sebastien Ogier Title Priority Over Teams' Crown
कुम्भ राशिका जातकको लागि आजको दिन स्वास्थ्यसमस्या हुनसक्छ । मनमा अशान्ति जाग्नेछ । यस्तो अवस्थामा तपाई आफूबसेको स्थान नजिकको मठ मन्दिर जा देवालयमा जानु होला । आजको दिन अनावश्यक आरोप पनि लाग्न सक्छ । परिवारका सदस्यहरुले तपाईमाथि अनावश्यक आरोप पनि लगाउन सक्छन् ।
विहान सूर्योदयको दर्शन गर्न उत्तम हुनेछ । काममा धैयता र नियमित काम बाहेक नयाँ काम नगर्नुहोला । ब्यापार ब्यबसायमा लाभ हुनेछ । शिवालय यात्रा फलदायी हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । आजको दिन घर गृहस्थको लागि केही नयाँ सामग्री खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । Join our community for more daily weekly and yearly or Aajako Rashifal Internet Khabar
Daily horoscope: Are the stars lined up in your favour? Find out the astrological prediction for Aries, Leo, Virgo, Libra and other zodiac signs for April 13, 2022.
Previous articleसपनामा हात्ती देखेमा के फल प्राप्त हुन्छ ?
Next articleबिहान देशभर बदली, मौसम सम्बन्धी आयो यस्तो खबर – Latest news and weather forecasts